सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढेपछि खुल्यो घर सम्हाल्न तालिम | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढेपछि खुल्यो घर सम्हाल्न तालिम
सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढेपछि खुल्यो घर सम्हाल्न तालिम
जेठ २६ गते, २०७६ - १२:०२
कायरो । इजिप्टको कायरो विश्वविद्यालयमा छात्राहरूलाई बिहेपछि कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर तालिम दिन थालिएको छ। सम्बन्ध विच्छेदका घटना निकै बढेपछि यस्तो तालिम कक्षामा नाटक प्रदर्शन गरी समस्या समाधान गर्न सिकाइन्छ।
एउटा नाटकको दृश्य छ – ‘ श्रीमान् कार्यालयबाट घर आउँछन्। उनले कूचो लगाइरहेकी श्रीमतीसँग सोध्छन्। खाना बनाइनौं ? पत्नी जवाफ दिन्छिन् – केटाकेटी मैले हेरूँ। कार्यालय पनि जाऊँ। के के गरूँ ? ’ यसरी रमाइलो पारामा गृहस्थी जीवनमा आउने तीतामीठा अनुभव र प्रेमको पाठ सहज तरिकाले सम्झाइन्छ। नाटक हेरेपछि श्रीमान्ले पनि घरको काम गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थी र शिक्षकले अनुभूति गर्छन्।
इजिप्टमा सम्बन्धविच्छेद निकै बढेको छ। गत वर्षमात्रै १ लाख ९८ हजार व्यक्तिले सम्बन्धच्छिेद गरेका थिए। यो पहिलो वर्षकाभन्दा ३ हजारले बढी हो। यहाँको सरकारले सन् २०२० सम्म वार्षिक ८ लाख विद्यार्थीलाई यस्तो तालिम दिने भएको छ। स्नातक तहका विद्यार्थीले कुनै पनि वर्षमा यो तालिम लिन सक्छन्। विश्वविद्यालयले यो तालिम सबै छात्राका लागि अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। –एजेन्सी
जेठ २६ गते, २०७६ - १२:०२ मा प्रकाशित